ကိုဗာချစ်ဟာ Kovacic မန်ယူအသင်းကို ငြင်းဆန်ဖို့အသင့်ပါ
မန်ယူရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ ကိုဗာချစ် Kovacic
3 Aug 2018 . 10:26 AM
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ခရိုအေးရှားကွင်းလယ်လူ ကိုဗာချစ် Kovacic ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ငြင်းပယ်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကတော့ ကိုဗာချစ်အတွက် ပေါင်(၅၄)သန်းအထိ အသုံးပြုဖို့ရှိနေခဲ့တာပါ။ ကိုဗာချစ် Kovacic မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကို ငြင်းပယ်ဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ မော်ရင်ဟို Morinho ရဲ့နည်းစနစ်ပိုင်းတွေကို သူ့အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ကိုဗာချစ် Kovacic ဟာခရိုအေးရှားအသင်းနဲ့အတူ ဒုတိယဆုကိုရရှိခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာတော့ ပုံမှန်နေရာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခြင်းကတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ လက်ရှိအပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို အားမရဖြစ်နေတဲ့ နည်းပြ့ မော်ရင်ဟို Morinho အတွက်စိတ်ပျက်စရာလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အားနည်းနေတဲ့အပြင် အသင်းရဲ့အဓိကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာစီယဲလ် Martial ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းလှုတ်ခတ်နေတဲ့အတွက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အခြေအနေတွေကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Photo: Goal.com , This Is Anfield
မနျယူရဲ့ကမျးလှမျးမှုကို ငွငျးပယျဖို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့ ကိုဗာခဈြ Kovacic
ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးရဲ့ ခရိုအေးရှားကှငျးလယျလူ ကိုဗာခဈြ Kovacic ဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကို ငွငျးပယျဖို့ အသငျ့ရှိနတေယျလို့သိရပါတယျ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဘကျကတော့ ကိုဗာခဈြအတှကျ ပေါငျ(၅၄)သနျးအထိ အသုံးပွုဖို့ရှိနခေဲ့တာပါ။ ကိုဗာခဈြ Kovacic မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးကို ငွငျးပယျဖို့အသငျ့ရှိနတေဲ့ အဓိက အကွောငျးအရငျးကတော့ မျောရငျဟို Morinho ရဲ့နညျးစနဈပိုငျးတှကေို သူ့အနနေဲ့ကွိုကျနှဈသကျခွငျးမရှိလို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ကိုဗာခဈြ Kovacic ဟာခရိုအေးရှားအသငျးနဲ့အတူ ဒုတိယဆုကိုရရှိခဲ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ ကလပျအသငျးဖွဈတဲ့ ရီးယဲလျမကျဒရဈအသငျးမှာတော့ ပုံမှနျနရောအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနရေတဲ့ ကစားသမားပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုမြိုးသတငျးတှေ ထှကျပျေါလာခွငျးကတော့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ လကျရှိအပွောငျးအရှလေု့ပျဆောငျပုံတှကေို အားမရဖွဈနတေဲ့ နညျးပွ့ မျောရငျဟို Morinho အတှကျစိတျပကျြစရာလို့ပဲဆိုရပါလိမျ့မယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အပွောငျးအရှလေု့ပျဆောငျခကျြတှေ အားနညျးနတေဲ့အပွငျ အသငျးရဲ့အဓိကစားသမားတဈဦးဖွဈတဲ့ မာစီယဲလျ Martial ရဲ့အနာဂတျကလညျးလှုတျခတျနတေဲ့အတှကျ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ အပွောငျးအရှအေ့ခွအေနတှေကေတော့ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
by Naing Linn . 56 mins ago